Bacda baakadaha Baako & Soosaarayaasha
Roll Khatimidii Vacuum Cuntada 10 ″ X 50′- 2 tirinta
Astaamaha: 1. Isticmaalka qalabka PA / Premium iyo qalabka farsamada casriga ah. PA / PE Qalabka ceyriinka ah: Teknolojiyada saddexda caddeyn leh waxay ka soo bilaabatay 5 lakab oo isku uruursaday cadaadis heerkul sarreeya oo muddo dheer ah, lakabyada nylon-ka dhexe (PA) waxay ka hortageysaa hawo qabow iyo biyo inay ku dhex dhacaan bacda wax lagu duubo. Waxyaabaha jilicsan ee nayloon u adkaysata daloolka: Nylon xoogiisa cufnaanta iyo cadaadiska cadaadiska ayaa isbeddela heerkulka oo wuxuu noqon karaa qaboojiye oo la qaboojin karaa, oo leh iska caabin heerkul adag. 2. U hoggaansanaaw fo ...
HONGBANG waxay macaamiisha ku baahisay Yurub iyo Ameerika muddo ka badan 20 sano u qaybisay caado tayo sare leh oo daabacan duubista wax soo saarka filimka balaastigga ah. Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo balaaran oo caag ah oo dahaaranaya filim. Badeecooyinka filimka badankood waxaa loo isticmaalaa codsiyada baakadaha cuntada inta soo hartayna waxay aadaan codsiyo gaar ah. Waxaan u siineynaa xalal dalabyo duurjoog ah oo codsiyo filim ah. Tirada qaabeynta suurtagalka ah ee filimkeena lakabyada badan ka muuqan ma ahan mid aan xad lahayn. Hadday ...
Maalmahan, in la yareeyo fayrasyada waxay noqoneysaa arrinta ugu muhiimsan, sidaa darteed warshaddeenna waxay kubiirtaa dagaalka adduunka. Waxaan ku siineynaa baakadaha wejiga lagu xiro ee bacaha balaastikada leh astaamo, kuwaas oo ka ilaaliya maaskaro wajigaaga dhammaan waxyeelooyinka suurtagalka ah isla markaana dheereeya waqtiga keydinta. Bacaha balaastigga ah waxay ku leeyihiin sintir ama sharooto isku-dhejisan xagga sare. Kuwani waxay ka dhigayaan waji-xidhka wejiga mid ku habboon oo si fudud u isticmaali kara. Xirmada waxaa ka mid ah 1-20 ama in ka badan oo wajiga daboolan. Waxaan soo saarnaa bacda baakadaha baakadaha la tuuro iyo ma ...
Bacda Safka Hawada ee loogu talagalay Isticmaalka Badeecada Fregile oo waxyeello u geysata Ballaca caadiga ah ee duubka haadka hawada waa 2 cm, 3 cm Wareegga ballaaran ee hawada, wuxuu leeyahay saameyn roon oo wanaagsan. Laakiin inta badan la isticmaalo waa 3 cm ballac ballaadhan. Dhumucdu sidoo kale waxay leedahay 7um, kuwa sii dhumuc weyn ayaa leh difaac fiican. Haddii aad u baahan tahay habeyn, fadlan nala soo xiriir si aan uga wada hadalno. Waxay sidoo kale noqon kartaa jeexitaan ama goyn, doonista alaabada nugul, sida farshaxanada muraayadaha ah, gaarsiinta degdegga ah, khamriga cas, aaladaha, qalabka saxda ah, iwm.
Waraaqda Kraft istaaga kiishka warqadda istaaga kiishku waa qaabka baakadaha ugu caansan ee suuqa maxaa yeelay qaabkan baakaduhu waa noocyo badan oo wax ku ool ah sidoo kalena soo jiidasho leh. Sida magaca laftiisa ka muuqata, boorsooyinkani waxay awoodaan inay istaagaan meel kasta oo adag. Waxay leedahay awood soo bandhigid shelf oo weyn waxayna yareyn kartaa baahiyaha keydinta iyo kordhinta boosaska shelf. Badanaa, boorsada istaagga waxaa badanaa loo isticmaalaa cunnada fudud, uunsiga, dahabka, shaaha ama baakadaha baakadaha. Guryaha istaagga kiishka s ...
Kiishka caaga ah ee istaaga waa qaabka ugu caansan ee wax lagu rito ee suuqa maxaa yeelay qaabkan baakaduhu waa noocyo badan oo wax ku ool ah sidoo kalena soo jiidasho leh. Sida magaca laftiisa ka muuqata, boorsooyinkani waxay awoodaan inay istaagaan meel kasta oo adag. Waxay leedahay awood soo bandhigid shelf oo weyn waxayna yareyn kartaa baahiyaha keydinta iyo kordhinta boosaska shelf. Badanaa, boorsada istaagga waxaa badanaa loo isticmaalaa cunnada fudud, uunsiga, dahabka, shaaha ama kafee, Cunto Eyga, Baakadaha cuntada ee xayawaanka. Guryaha baakadaha cuntada lagu kariyo ee ...
Bacda qalabka mobilada
Boorsada istaaga waa nooca ugu caansan ee wax lagu rito ee suuqa maxaa yeelay qaabkan baakaduhu waa noocyo badan oo wax ku ool ah sidoo kalena soo jiidasho leh. Sida magaca laftiisa ka muuqata, boorsooyinkani waxay awoodaan inay istaagaan meel kasta oo adag. Waxay leedahay awood soo bandhigid shelf oo weyn waxayna yareyn kartaa baahiyaha keydinta iyo kordhinta boosaska shelf. Badanaa, boorsada istaagga waxaa badanaa loo isticmaalaa cunnada fudud, uunsiga, dahabka, shaaha ama kafee, Cunto eyga, Cuntada xayawaanka ， iyo xirmooyinka taleefannada. Properti ...
Qashin-jeexyada Futada Faa'iidooyinka Futada Xaashida Xaanshida waa hal-abuurnimo qaab wax lagu rakibo oo naqshad gaar ah u leh alaabooyinka dareeraha ku saleysan Sababta ka dambeysa aqoonsiga boorsooyinkaan isdaba-joogga ah ayaa ah adeegsigeeda qaab saaxiibtinimo leh oo ku habboon kaydinta cabitaannada, duugga ama alaabada waaweyn ee dabacsan . Ka sokow, marka la barbardhigo PET-ga caadiga ah ama dhalooyinka dhalada ah, boorsooyinka dhibku ka soo gaadho way ka sahlan yihiin gaadiidka waxayna ku habboon yihiin khaanadaha tafaariiqda.